Maamulka gobolka Mudug oo sheegay in amaanka Galkacyo la adkeeyey la iskuna halayn karo, – Radio Daljir
Maamulka gobolka Mudug oo sheegay in amaanka Galkacyo la adkeeyey la iskuna halayn karo,
Agoosto 23, 2012 3:53 g 0
Galkacyo-23-August-2012——— Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac, (Tigey) oo caawa u waramay barnaamijka Caawa+Daljir, ayaa sheegay in amaanka Galkacyo xiligan yahay mid aad u wanaagsan kadib hawlgalo mudooyinkii danbe ay wadeen ciidanka amaanka Puntland.
Maxamed Yuusuf ?wuxuu sheegay in lasoo qabtay dad aad u tira badan oo ku lug lahaa falal danbiyeedyo badan oo ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) wuxuu sheegay in wada shaqaynta ka dhaxaysa maamulka Puntland iyo Galmudug ay soo wanaagsanaanayso balse aysan ahayn sidii laga rabey sida uu hadalka u dhigay.
Geesta kale Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in xiligan gobolka Mudug ku talaabsaday horumar aad u balaadhan oo dhinaca adeegyada bulshada ah, wuxuu sheegay in magaalada xiligan laga wado dayactirka wadooyinka muhiimka ah, sida wadada dheer ee laamiga ah taasoo burbur ka muuqdey hadeerna dayactir fiican ka socdo.
Magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa ilaa sanadii 2008 waxaa ka dhacayey falal amaanka ka dhan ah kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday dadka indhaha bulshada ah, Sida Cuqaal, Aqoon yahano, Culimo, Ganacsato, saraakiil dawladeed, iyo qaybo kale oo bulshada muhiim ah, waxaana xiligan ka socda hawlgalo lagu xaqiijinayo amaanka Galkacyo.
Al-Shabaab oo tababaranaysa dhalinta Soomaliyeed ee dhigata jaamacadaha dalka Pakistan
Diyaarado dagaal oo duqayn u geystey degmada Baardheere ee gobolka Gedo,